लेखनाथ नगरपालिका वडा नं २६ राखी कन्धनी डाँडा स्थायी घर भएका केदार ढुंगाना १२ वर्षदेखि युरोपमा कार्यरत छन् । सन् २००६ मा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा एक कार्यक्रममा भाग लिन गएका बेला उनले युरोपलाई नै कर्मथलो बनाउने सोचेका हुन् ।
बुबा रामचन्द्र ढुंगाना र आमा तुलसी ढुंगानाको कोखबाट २०२७ सालमा जन्मिएका उनी एमबिए समाज शास्त्रका साथै विएल पनि अध्ययन गरेका छन् । झण्डै १४ वर्षसम्म नेपालको निजामति सेवा र ५ बर्ष युनिसेफमा काम गरेका उनी देशको द्वन्द्वकालिन अबस्था र तत्कालिन परिस्थिति सहज नभएकै कारण युरोपलाई कर्मथलो बनाउनु परेको बताउँछन् । हाल उनी सपरिवार स्पेनमा बस्दै आएका छन् ।
एनआरएनए स्पेनका भूतपूर्व कोषाध्यक्ष र नेपाली प्रवासी मञ्च स्पेनका भुपु सल्लाहकार रहेका उनी हाल कास्की समाज स्पेनको अध्यक्ष रहेका छन् । सल्लाहकार हुँदै अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका ढुंगानासँग गरिएको कुराकानी :
स्पेनमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यहाँ ७ वर्षजति भिन्नै व्यवसाय गरे । तर, स्पेनको क्रमश ः घट्दो आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायमा सोचेजस्तो उपलब्धि नहुने भएपछि सबै व्यवसाय बन्द गरेर ४ वर्षदेखि जापनीज सुसी रेष्टुरेण्टमा सेफको काम गरिरहेको छु । यस कम्पनीमा अन्य थुप्रै नेपाली साथीहरू पनि कार्यरत हुनहुुन्छ ।
एनआरएनएका साथै अर्को संस्थाको नेतृत्व गर्नुभएको छ, समय कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
मेरो बाल्यकालदेखिको स्वभाव अनुसार अध्ययन र कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै बचेको समयलाई सामाजिक कार्यमा लगाउने गर्दछु । सन् २०१२÷०१३ को कार्यकालमा एनआरएनए स्पेनको कोषाध्यक्षमा साथीहरूले मनोनयन गर्नुभयो । बिचको केही समयमा आफ्नै व्यवसाय र कार्यलाई समय दिन्छु । पछि स्पेनबासी कास्केली साथीभाइहरूले कास्की समाज स्पेनको अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत मनोनयन गरेर दुईवर्षे कार्यकालको जिम्मा दिनुभएको छ । कामबाट बचेको समय पूर्णरुपमा सामाजिक काममा लगाएको छु ।
कास्की समाज स्पेनको स्थापना कहिले र किन गरियो ?
२५ जनवरी २०१५ मा स्पेनमा रहेका कास्केलीहरूबीच आपसी भाइचारा बढाउने उद्देश्यले समाजको स्थापना भएको हो । संस्था विधिवत रुपमा दर्ता पनि भएको छ । समाजलाई सामाजिक परिचय दिलाउँदै स्पेनबासी कास्केलीहरूको खोजी तथा तथ्याङ्क संकलन, सम्पर्क गर्ने र स्पेनमा रहेका अन्य नेपाली संघ संस्थाहरूसँग समन्वय र हातेमालो गर्दै २५ जनवरी २०१६ मा प्रथम अधिबेशन सम्पन्न गरिएको थियो ।
समाजले अहिले सम्म गरेका कामहरू के-के छन् ?
समाजले अहिलेसम्म गरेका कामहरूका बारेमा भन्नु पर्दा भूकम्प पीडितहरूलाई २१ सय २२ युरो सहयोग, कल्याणकारी कार्यक्रम अनुसार नेपालमा विभिन्न रोगले पीडित भएकाहरूका लागि आर्थिक सहयोग, कास्की जिल्ला लुक्लेमा आएको भिषण पहिरोले क्षतिग्रस्त ज्ञानोदय प्रा.विमा रु. ३ लाख आर्थिक सहयोग तथा स्टेशनरी वितरण, स्पेनस्थित बालबालिका बीच ‘भविष्य निर्माणमा सरोकारवाला निकायको भूमिका’ तथा दायित्व विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, स्पेनबासी १० जना बालबालिकाहरूलाई २ महिने कम्प्युटर शिक्षा तालिम सञ्चालन, स्पेनबासी ३० जना बालबालिकाहरू र २० जना अभिभावकहरूसहित स्पेनको रमणीय स्थान पोर्ट एडभेन्चर वल्र्डमा एक दिवसीय शैक्षिक अवलोकन तथा भ्रमण, अविरल वर्षाका कारण विस्थापित हुन पुगेका माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ५ रिभानुका पहिरो पीडितहरूलाई १ लाख रुपैयाँको राहत तथा पुन : निर्माणमा आर्थिक सहयोग लगायतका कामहरू गरेको छ ।
राजदूतहरू राजनीतिक नियुक्ति तथा दलिय भागवण्डाको आधारमा सरकारले नियुक्ति गर्ने हुँदा नेपाल सरकारले स्पेनमा खोलेको नयाँ दूतावासमा राजदूत भरतबहादुर रायमाझीज्यूको कुटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । र उहाँका कार्यकालमा सोचेजस्तो कार्यप्रगति हुन नसकेको स्पेनस्थित सबै संघसंस्थाले महशुस गरेका थिए ।
तपार्ईले नेतृत्वमा आएपछि संस्थाले गरेका कामहरू के के हुन् र भावी योजनाहरू के–के छन् ?
२०१८ मार्च ११ तारिखमा भएको समाजको दोश्रो अधिबेशनले मेरो नेतृत्वमा सर्बसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । त्यसयता मेरो नेतृत्वमा भएका कामहरू यसप्रकार रहेका छन् :
२०७५ मा नेपाली नयाँवर्षको कार्यक्रम तथा भित्तेपात्रो विमोचन । पर्वतको पैयु गाउँपालिका ४ हातेमालो चोक निवासी व्रेन सम्बन्धी विरामी किसान रिजाललाई आर्थिक सहयोग, समाजको कार्यालय स्थापना कार्यक्रम, मैत्रीपूर्ण बनभोज कार्यक्रम, नेपाली पाठशाला बार्सिलोनाका ३५ बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक पाठ्य सामाग्री वितरण, सवारी चालकको लागि १३ जनालाई साढे दुई महिने प्रशिक्षण, नेपाली महिलाहरूको महानपर्व हरितालिका तिज मनाउनुका साथै दर खुवाउने कार्यक्रम, १६ जनालाई शुसी खाना सम्बन्धी तालिम, स्पेनमा रहेका नेपालीलाई स्पेनी वकिलद्वारा निःशुल्क परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, अंग्रेजी नयाँवर्ष २०१९ का अवसरमा राष्ट्रियस्तरका कलाकारहरूको साथमा ‘लोक दोहोरी बृहद् सांस्कृतिक कार्यक्रम’ को आयोजना गरिएको थियो ।
त्यस्तै कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका १० स्थित कुँडहर आधारभुत विद्यालयका ‘दृष्टिबिहिन’ विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर तथा लत्ताकपडा वितरण, मादी गाउँपालिका वडा नं ९ घर भई हाल पोखरा नगरपालिका ६ निवासी रविन अधिकारी र इन्दिरा बास्तोला अधिकारीको ८ महिने छोराको स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग लगायत रहेका छन् ।
आगामी योजनाहरूमा पोखरा महानगरपालिका र बार्सिलोना नगरपालिकाको भगेनी सम्बन्ध स्थापित गर्न दूतावासको सहयोगमा आवश्यक पहल गर्ने, स्पेनका विभिन्न सहरमा समाजको समिति गठन गरिने, स्पेनमा रहेका कास्केलीहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने, स्पेनमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने रहेको छ ।
कास्कीको पुम्दीभुम्दी पर्यटकीय स्थलमा स्थापना हुन लागेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो शिवको मूर्ति र पार्क स्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने र शिलापत्रमा कास्की समाज स्पेनको नाम लेखाउने, कास्की जिल्ला वा स्पेनमा बस्ने कास्केलीहरूको बिरामी या आपतकालिन अवस्थामा आर्थिक सहयोग गर्ने, कास्की समाजले बार्षिक रुपमा गर्दै आएको लोक कल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ बराबरको लोक कल्याणकारी काम तथा सामग्री वितरण गरिने, कास्कीको कुनै एक सरकारी स्कुलमा अध्ययन गर्ने जेहेन्दार, गरिब, असहाय, र दलित विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, कास्की जिल्लामा वर्षको १ पटक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
त्यस्तै समाजको स्मारिका प्रकाशन गर्ने तथा समाजले गर्दै आइरहेको विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै समय सापेक्ष कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने रहेको छ ।
स्पेनमा नेपालीको संख्या कति पुग्यो र त्यहाँको अवस्था बारे बताइदिनुहोस् न ?
स्पेनमा रेसिडेन्ट कार्ड (बैधानिक कागज) लिन सजिलो हुने भएकोले विगत एक दशकदेखि नेपालीहरूको बढ्दो चाप र कागज बनिसकेपछि पारिवारिक पुर्नमिलनका साथै बालबच्चाहरूको जन्मले झण्डै १५ हजार भन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ । स्पेनमा बसोबास गर्न पाउने खुकुलो कानुनका कारण आप्रवासीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति पाइन्छ । अध्ययन, रोजगारी वा राजनैतिक रुपमा विस्थापित भएका वा विभिन्न बहानामा स्पेन आएका कुनै पनि विदेशीले ३ वर्ष यहाँ बसेको प्रमाण पेस गर्न सके यहाँको आवासीय अनुमतिको लागि निवेदन दिन सक्छ । र यो नियम युरोपका अन्य देशहरू भन्दा फरक र सजिलो पनि भएकोले सबैको गन्तव्य स्पेन हुने गरेको छ ।
स्पेनमा दूतावास स्थापना भएको छ दूतावासको सक्रियता कस्तो पाउनु भएको छ ?
दूतावास स्थापना भएको १४ महिना भयो । राजदूतहरू राजनीतिक नियुक्ति तथा दलिय भागवण्डाको आधारमा सरकारले नियुक्ति गर्ने हुँदा नेपाल सरकारले स्पेनमा खोलेको नयाँ दूतावासमा राजदूत भरतबहादुर रायमाझीज्यूको कुटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । र उहाँका कार्यकालमा सोचेजस्तो कार्यप्रगति हुन नसकेको स्पेनस्थित सबै संघसंस्थाले महशुस गरेका थिए । उहाँ फिर्ता भइसक्नु भएको छ । अहिले प्रथम सचिव हरिकान्त पौडेलले २०१९ जनवरी देखि कार्यवाहक राजदूतको पद सम्हाल्दै आउनु भएको छ । उहाँको काम सन्तोषजनक रहेको छ । नेपालीहरूले सेवा पाइरहेका छन् ।
नेपाली व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या के–के छन् ?
स्पेनमा झण्डै २ सय बढी नेपाली रेष्टुरेण्ट, पसल र सुपरमार्केट २०० को हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हाललाई त्यस्तो कुनै पनि समस्या परेको देखिन्न । तर आर्थिक मन्दीले अलि अलि असर भने गरेको छ ।
नेपालमा पनि केही गर्ने सोच बनाउनु भएको छ कि ?
देश संघीयतामा गइसकेको अवस्था र स्थानीय सरकारले सेवा दिइरहेको अवस्थामा आफू जन्मिएको माटोमा केही गर्ने अवसरहरू सिर्जना भइरहेका छन् । यो हामी प्रवासी नेपालीको लागि खुसीको कुरा हो । ती अवसरहरूमा हामी सामेल हुनेछौं ।